​हँसाउने अभियान « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७४, आईतवार १४:२८
नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केही समयअघि भन्नुभएको थियो, कम्युनिष्टको शासन आयो भने नेपाली जनताले रुन पनि पाउने छैन । उहाँले यो कुरा कसरी भन्नुभएको हो थाहा छैन । किनभने कम्युनिष्टको शासनमा रुन नपाएको देश कुन हो कसैलाई थाहा छैन । अझ साँच्चै भनुँ भने कट्टर कम्युनिष्ट शासन भएको देशमा जनता झन् मज्जाले रुन पाइरहेका छन् । अझ रोइ नै रहेका छन् भन्दा पनि फरक नहोला ।
सायद कम्युनिष्ट शासन आए जनताले रुन नपाउला भनेरै होला, अहिले कांग्रेस जनतालाई हँसाउने काममा लागिरहेको छ । जसरी हुन्छ जनतालाई हँसाउनु नै अहिले कांग्रेसको प्रमुख काम भएको छ । कांग्रेसका नेता जता पुग्छन् त्यतै जनता हँसाउने काम गर्छन् । अहिले चुनावको मौसम छ, कांग्रेसका नेताहरूले जहाँ भाषण दिए पनि जनता हाँसिरहेका हुन्छन् । जनता हँसाउने यो अभियानको नेतृत्वचाहिँ कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै लिनुभएको देखिन्छ । उहाँ निर्वाचन आचारसंहिता तोड्दै हेलिकोप्टर चढेर जिल्लातिर पुग्नुहुन्छ, अनि भन्नुहुन्छ– कानुन कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्छु । उहाँले यसो भन्नुभएपछि हाँस्नुपरेन त ?
६४ सदस्यको सरकार छ । तर, प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ – राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो पार्नुपर्छ । अब नहाँसेर भो ? राजधानी काठमाडौंको सडक धुलाम्ये भएर हिँड्न गाह्रो भइरहेको छ तर प्रधानमन्त्रीले लुक्ला गएर भन्नुभयो – सोलुदेखि सुर्केसम्मको सडक दुई वर्षमा कालोपत्रे बनाइदिन्छु । अब नहाँसेर भो ?
भाषण सुन्ने फुर्सद नभएका मानिस घरमै बसी बसी हाँसिरहुन् भनेर कांग्रेसले घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ । अब कांग्रेसको घोषणापत्र पढेर घरमै बसीबसी हाँस्न पाउने वातावरण जनतालाई प्राप्त भएको छ । कम्युनिष्टले भए रुनसम्म पनि दिने थिएन । कांग्रेसले घोषणापत्रैदेखि हँसाउन थालेको छ । धन्यवाद कांग्रेस !
पोखरा नजिकैको पुल भासियो, यातायात बन्द
वर्षायाम लाग्यो, विपद् व्यवस्थापनमा परम्परागत सरकारी तयारी
राजधानीमा २४ घण्टामा २२ सय चालकमाथि कारवाही
चालक अनुमति पत्रमा वर्ग थपको आवेदन खुल्ला
चिरिबाबु नेतृत्वको महानगरको यो हालत
गन्ध फाल्ने औषधि
मलाई किन फोन गरेको ? : सैनिक प्रवक्ता सिलवाल
युवराजले ज्वाईं पोस्न बनाएको मापदण्ड महाप्रसादले उल्टाउँदै
सेनाको ह्याङ्गरमा कसरी छिर्यो अन्नपूर्ण ?
हाकिमले सिपाहीको गोजीमा हात हाल्दा
खुमलटार, बालुवाटार, बालकोट र बानेश्वर सबैतिर भेट्नेको लर्को